အာရှငွေကြေး - ယန်းနှင့်ရှဲကယ်လ် | ခရီးသွားသတင်း
Mariela Carril | | အကြံပေးချက်များ
ဤအတောအတွင်းနှင့်အချို့သောအပြောင်းအလဲများသို့မဟုတ်ဘုံစျေးကွက်များရှိနေသော်လည်း, များစွာသောငွေကြေးနေဆဲရှိသည်။ ဒီနေ့ငါတို့စကားပြောရမယ် ဂျပန်နှင့်theသရေလအမျိုး၏ငွေကြေး.
၎င်းသည်ဂျပန်နိုင်ငံ၏ငွေကြေးဖြစ်သည် နှင့်ကမ္ဘာ့အရေးအပါဆုံးငွေကြေးတစ်ခု။ စာသားအတိုင်းပြန်ဆိုပါကစကားလုံးသည်ဆိုလိုသည် အဝိုင်း o ပတ်ပတ်လည် နှင့်ဒီဇိုင်းကိုမှုတ်သွင်းသောမူရင်းငွေကြေးမက္ကဆီကန် peso ကူးယူပုံရသည်။
ယန်း ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကာလအတွင်းမိတ်ဆက်ခဲ့သည် မေဂျီနှစ်ပေါင်းရာချီသောဂျပန်နိုင်ငံ၏အင်အားအကောင်းဆုံးပဒေသရာဇ်မင်းများလွှမ်းမိုးသောအရိပ်အနှောင်ဝါဒအဆုံးသတ်ခြင်းနှင့်hundredကရာဇ်မင်း၏နိုင်ငံရေးဘဝသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိခြင်းကိုဖော်ပြသောဂျပန်သမိုင်းတွင်ဖြစ်သည်။
Meiji ပြန်လည်ထူထောင်ရေးသည်အဓိကအားဖြင့်ရုပ်ရှင်တွင်တွေ့မြင်ရသောတိုင်းပြည်၏ခေတ်မီရေးကိုဆိုလိုသည် နောက်ဆုံး ဆာမူရိုင်း Tom Cruise ရဲ့သရုပ်ဆောင်မှုနှင့်ခေတ်သစ်ဥရောပပုံစံကိုဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိခြင်း။
ဤနှစ်များအတွင်းဂျပန်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်ကြီးမားသောပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည် ယန်းဟာအစားထိုးရောက်ရှိလာသည် မွန်, ယခင်ကာလ၏ငွေကြေး, အဲဒိုကာလ။
၎င်းကို ၁၈၇၁ ဥပဒေအရတရားဝင်ငွေကြေးအဖြစ်တရားဝင်သတ်မှတ်ထားပြီးထိုအချိန်တွင်ပတ် ၀ န်းကျင်လည်ပတ်နေသောခေတ်သစ်စနစ်သို့ ၀ င်ရန်လိုအပ်သည်။ ရွှေပုံစံ.
Gold Standard ဆိုတာဘာလဲ။ ထုတ်ပေးတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ငွေကြေးတစ်ခုစီမှာသူ့မှာရှိခဲ့တယ် ရွှေကျောထောက်နောက်ခံ ဒီကွာခြားမှုကိုမလေးစားတော့ပေမယ့်ဒီအချိန်ဟာအတော်လေးကြာခဲ့ပါပြီ။ အမှန်မှာထိုစဉ် မှစ၍ ယန်းငွေသည် floating system ၏ကစားပွဲထဲသို့ ၀ င်ရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ၁၈၇၁ ခုနှစ်မှစ၍ ယနေ့အထိငွေကြေးစနစ်၏အပြောင်းအလဲများသည်၎င်းကိုလွှမ်းမိုးခဲ့သည်။
ကောင်းပြီ ဒင်္ဂါးပြား 1, 5, 10, 50, 100 နှင့် 500 ဖြစ်ကြသည် y ၁၊ ၂၊ ၅ နှင့် ၁၀၀၀၀ ယန်းငွေတောင်းခံလွှာများ။ ဒင်္ဂါးများကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်။
၎င်းသည်တိုင်းပြည်ဖြစ်သည် ငွေသား, ငွေသားဒါကြောင့်ခရက်ဒစ်ကဒ်ရှိနေပြီ၊ တိုးတက်လာပေမဲ့စတိုးဆိုင်များ၊ စူပါမားကက်များနှင့် gastronomic နေရာများဟာအမြဲတမ်းခက်ခဲပြီးမြန်ဆန်တဲ့ငွေကိုပိုကြိုက်လိမ့်မယ်။ အကယ်၍ သင်သည်ဂျပန်ကိုလာရောက်လည်ပတ်ရန်စဉ်းစားနေပါကယင်းကိုစိတ်စွဲမှတ်ထားပါ။
၎င်းသည်ရှေးဟောင်းအကေးဒီးယန်းသို့မဟုတ်ဟေဗြဲအမည်ဖြစ်ပြီးရှေးခေတ်ဆူမားရီးယားတွင်အမြစ်များရှိသည်။ အလွန်ဝေးကွာသောအချိန်၌ ၎င်း၏တန်ဖိုးကိုတိုက်ရိုက်ဂျုံအလေးချိန်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်ဒါကြောင့်တွက်ချက်ထားတာကရှကယ်တစ်ကဂျုံ ၁၈၀ ဂရမ်နဲ့ညီမျှတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ခရစ်တော်မတိုင်မီနှစ်ပေါင်း ၂,၅၀၀ ခန့်တွင်စိတ်ကူးတစ်ခုရရန်ပြောကြသည်။
ထိုအမည်နှင့်ဤငွေကြေးကိုသုံးသောမြို့များစွာရှိသော်လည်းဂျုံအလေးချိန်နှင့်ဆက်နွှယ်မှုမရှိဘဲရွှေနှင့်ငွေတို့၏ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ ဒီငွေကိုဆက်သုံးစွဲနေတဲ့တိုင်းပြည်ဟာIsraelသရေလအမျိုးပဲ။ ဤတွင်နာမကိုအမှီကြီးစွာသောအလေးချိန်ရှိပြီး နိုင်ငံအတွက်သင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်သည်.
သရေလအမျိုး၌ဒင်္ဂါးများစွာရှိသည် နိုင်ငံတစ်ခုအနေဖြင့်၎င်း၏တိုတောင်းသောသမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက်လုံး - Gerah Kurus၊ Akce၊ ပါလက်စတိုင်းပေါင်၊ El ရှကယ်လ် ရှကယ် ရှီကယ်သည်1980သရေလနိုင်ငံ၏ငွေကြေးဖြစ်သည် the သရလေအမြိုးသားတို့သညျအစားထိုးလေ၏။
ငါးနှစ်အကြာတွင်ဒီအလှည့်အတွက်ဖြင့်အစားထိုးခဲ့သည် အသစ် ရှယ်ကယ်ဒင်္ဂါးများနှင့်ငွေတောင်းခံလွှာများနှင့်အစ္စရေးစီးပွားရေးပြန်လည်ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်ရည်ရွယ်သည်။ အခွက်တရာစီကိုတပိပ်စီခွဲရ၏ ကလောင် (အနည်းကိန်းအတွက် agora) ။
ငွေအကျပ် ၂၀၊ ၅၀၊ ၁၀၀ နှင့် ၂၀၀ အကျပ် ၁၀၀၊ ၁၀၊ ၅၊ ၁ ကျပ်နှင့် ၅၀၊ ၁၀၊ ၅ တို့၏မှတ်စုများရှိသည်။ ကလောင်။ ငါဆိုသည်ကား၊ အကယ်၍ သင်သည်အစ္စရေးသို့လာရောက်လည်ပတ်ရန်စဉ်းစားနေပါကသင်သည်နိုင်ငံခြားငွေကြေးဖြင့်တိုင်းပြည်ထဲသို့ ၀ င်နိုင်ပြီးဘဏ်များ၊ လဲလှယ်ခြင်းများ၊ အိမ်များ၊ ဟိုတယ်များနှင့်စာတိုက်များကိုနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးသို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ နိုင်ငံရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခရီးသွားဝက်ဘ်ဆိုက်ကနေသူတို့အကြံပေးတယ် ဒေါ်လာသို့မဟုတ်ယူရိုအနည်းငယ်ကိုသိမ်းထားပါ၊ အကြောင်းမှာဤနိုင်ငံခြားငွေကိုတိုက်ရိုက်လက်ခံသောခရီးသွား sites ည့်သည်များအလွန်များသောကြောင့်ဖြစ်သည်.
ထို့အပြင် အကယ်၍ သင်ခရီးထွက်ဖူးပါကသင်သည်ငွေအားလုံးကိုတစ်ပြိုင်နက်ပြောင်းလဲပစ်ရန်မလိုပါ၊ တဖြည်းဖြည်းချင်းပြောင်းလဲခြင်း၊ ငွေလဲလှယ်နှုန်းကိုအသုံးချခြင်းနှင့်တစ်ပြားမှမဆုံးရှုံးခြင်းတို့ကိုသင်သိသည်။ Israelသရေလအမျိုး၌လည်း ဘဏ်တွေထဲကပိုက်ဆံထုတ်နိုင်တယ် သူတို့သည်သင်၏နိုင်ငံတကာခရက်ဒစ်ကဒ်ကိုလက်ခံလျှင်။
အကယ်၍ သင်သည်ရှီကယ်လ်အချို့ကိုသိမ်းဆည်းပြီးဘင်ဂူရီယန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်တွင်ရှိနေလျှင်၎င်းတို့ကိုပြန်လည်လဲလှယ်နိုင်သည်။ အများဆုံးငွေလဲလှယ်နှုန်းအမေရိကန်ဒေါ်လာအထိဒေါ်လာ ၅၀၀ သို့မဟုတ်အခြားငွေကြေးနှင့်ညီမျှသည်။
Y သင်၏ငွေကြေးသည်ယူရိုဖြစ်ပါကသင်ကံကောင်းပါစေ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှီကယ်အသစ်ဟာအစ္စရေးရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုခွင့်ပြုတဲ့ငွေကြေးဖြစ်ပေမယ့်ယူရိုအဆင့်မှာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါကြောင့်မင်းမှာအားသာချက်ရှိတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ အကယ်၍ သင်သည်စပိန်လူမျိုးဖြစ်ပါကစပိန်တွင်ငွေကြေး ပြောင်းလဲ၍ မရပါ၊ သို့ဖြစ်၍ Israelသရေလအမျိုးသားတို့ကိုအလျှင်းမပြစ်မှားပါစေနှင့်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ခရီးသွား » အကြံပေးချက်များ » အာရှငွေကြေး: ယန်းနှင့်ရှယ်လ်ကယ်
ကလေးများနှင့်အတူ cruise6အကြောင်းပြချက်